Wonke umntu uyazi ukuba ziphi iingenelo zobusi ezizisa. Le ngenye yezinto eziphathekayo zendalo eziziwa ngabantu. Inyosi yindawo yokushukela isonka, enhle kwimpilo, inexabiso elikhulu lokutya. Ubusi busetyenziswa ngokubanzi ekuphekeni, kwiyeza kunye ne-cosmetology. Unokwenza ubusi buhlambuluke ubuso, usebenzisa ubusi.
Iingcebiso ezimbalwa zokusebenzisa ubusi ngobuhle bakho:
Ukuhlanjululwa kwesikhumba seHu .
- Ngaphambi kokuba siye eshahleni, siza kubeka ubusi elincinci esikhanyeni, kwaye sibhence ukwenzela ukuba ulusu lube lukhuni, luya kunika isikhumba ukukhanya kwemvelo, ukuphucula ukujikeleza kwegazi;
- Ukuze uhlambuluke iinwele, yongeza ijusi ye-lime nobusi, konke oku kuya kubangela ukuba izinwele zikhanye;
- Kwamanzi okuhlamba, songeza i-¼ ithisipuni yobusi, ulusu luya kukhanya;
- Hlanganisa ubusi kunye nama-almond agratiweyo kunye ne-oat flakes, kuya kuba bubuso obuhle bokutya;
- Hlanganisa ijusi ye-apple kunye nobusi kwaye usetyenzise imizuzu eyi-15 ebusweni, kuya kuba ngumaski ophuculisayo;
- Ukuze ulungise ubuso buso, xuba i-dessert yoku-1 i-spoonful of milk and honey. Shiya imizuzu eyi-10, kwaye ubeke ubuso bakho.
- Inyosi ingasetyenziselwa ukukhangela isikhumba esomileyo. Hlanganisa i-teaspoon yobusi, i-teaspoon yeoli yeoli, i-teaspoon yekota yerayisi yamnandi, kwaye ushiye imizuzu eyi-10.
- Ukucoca ulusu ngobusi. Siyichitha isikhumba nge-infusion ye-chamomile, yenza le mizuzu engama-10, uze usebenzise unobisi olusesikhunjeni kwilinen uze usebenzise iminwe yethu. Ukususela esikhumbeni uqala ukushiya udoti kunye ne-slag, okokuqala uza kubona "umdaka" omhlophe ophuma kwesikhumba ebusweni, kwaye uza kubona indlela iipilisi zesikhumba eziye zacinywa ngayo, senza ukusila okulula kumigca yokusila. Siyahlamba "ukungcola" ngamanzi afudumele kwaye sisula ubuso kunye ne-decoction ye-chamomile. Kwasekuseni unobuso obuhle kakuhle, iiperebhu ezicocekileyo kunye nesikhumba esikhanyayo.
Ukucoca ulusu lobuso .
Into eyingqayizivele yobusi yinto ehambelana nayo, ifanelekile nasiphi na isikhumba ebusweni, kwaye xa idibaniswe kunye nezixhobo ezahlukileyo, unokudala i-cosmetic efanelekileyo yiphina isikhumba. Ubunono bunzulu bunena phakathi kwimiba ebusweni, buyondla ngokugqibeleleyo, buyondla, buyicima, iyancwina isikhumba esomileyo, kwaye isuse i-greasy ukukhanya kwesikhumba seoli. I-moisturizes i-skin, kwaye yindlela enhle yokuphepha ukuguga kwangaphambili kwesikhumba. Ubusi buqinisa isikhumba, ama-wrinkles amahle ayabonakali. Uju lunezixhobo ezivuselelayo, ukuphulukiswa kwilonda, ukuchasana, ukuzisebenzisa ukunyanga kwe-eczema, i-dermatitis kunye ne-acne.
Ngentwasahlobo, unokwenza umasikha wasebukhosini, uthathe inxalenye elinganayo yobusi, ijusi lemon kunye nama-strawberries. Uhlanjululwa ulusu lobuso, ama-pores ahlambulukile, ulusu luvumba lomsindo kwaye likhanya. Emva kokuba imaski ithole isikhumba se-chic, kunye nesimo esihle sengqondo esivela kwi-aromatherapy.
Iibhondi zeeyun .
Bomelela iintambo ezinyaweni, zityulele kwaye zihlambulule isikhumba, zithuthukise inkqubo yesantya. Ulusu lobuso kunye nomzimba luba luhlambulukile, luncedo kwaye luvalo. Iibhondi ze-Honey zi luncedo kakhulu. Kwimilinganiselo emancinci kwibhabha enkulu ibeka i-dessert epheleleyo ye-dessert ye-honey, ingena emanzini ngophuphu, ikhuphe ukusila, ibuyisa, ikhupha ingxaki yokukhathazeka, ukukhathala nokuhlambulula ubuso.
Ngoku siyazi indlela yokwenza ubusi bokuhlanjululwa kwesikhumba ebusweni. Inhlanhla ekuzuzeni ukuvisisana nobuhle.
Ubusika buso busika, ukuzenzela
Mask ubuso obusuka kiwi
Indlela yokuchonga uhlobo luni lobuso besikhumba?
Ungachazela njani unyana ukuba kutheni kungekho ntata?
Ziziphi iindlela onokuyengcaza indoda
I-cocktail yobisi kunye neziqhamo kunye ne-ginger
Makuvuyiswa ngoSeptemba 1 ukuya kubafundi: unyancoma kakhulu kumntwana wesikolo kunye nomfundi wokuqala ootitshala, abazali, ugogo nenkokheli kunye nevesi. Sivule ngoLwazi lweSuku-2016
Indlela yokuchonga imiqondiso emithathu yomntu ongalunganga?
Ingaba umntwana uneminyaka engama-7 ekhaya?
Ukuphuculwa kwentetho yokulahla komntwana
Indlela yokuziphatha kakuhle nomntu
Isipinashi kwindlela yaseAsia
Ukunyamekelwa kwee Eyebrow
Ixesha elithile xa ungafuni ukulala ngesondo
Yintoni enokumnika umhlobo omhle ngomtshato?